Virus ကာကွယ်နည်းများ | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label Virus ကာကွယ်နည်းများ. Show all posts
ကွန်ပြူတာ သုံး သူများ သိထား သင့်သည့် PDF VIRUS အန္တရာယ်
မင်္ဂလာပါ ကျွန်တော် သည် ဆောင်းပါးမှာ တော့ နည်းပညာနဲ့ ပါတ်သက်လို့ အမှတ် မထင် တွေ့ရှိ ဖြစ်ပျက် တတ်တဲ့ Virus တွေရဲ့ အကြောင်း ထဲက Pdf Virus ဆိုတဲ့ အကြောင်း လေးကို mmcollection.info မှ ရေးသား ထားပြီး ဒဂုံသားလေး ကနေ ပြန်လည် ဝေမျှ ထားပါတယ် ဒါလေးကို ကွန်တော် အများ သူငါ အမှတ် တမဲ့ဖြစ် နေတဲ့ အန္တရာယ် ကို သတိ ပြုမိ စေရန် ပြန်လည် မျှဝေတဲ့ သဘောနဲ့ ခုလို အများ သိအောင် တင်ပြ လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်...
အောက်မှာ လေ့လာ လိုက်ပါနော်..
နည်းပညာ လေ့လာ သူများ အွန်လိုင်း ပေါ်မှာ တင်ထားသော နည်းပညာ စာအုပ် များ ဒေါင်းလုပ် ရယူကြမှာ မလွဲပါ ဘူးဗျာ။ တစ်နေ့တော့ အွန်လိုင်းမှာ စာအုပ် တစ်အုပ် ကို ဒေါင်းလုပ် ရယူပြီး ဖွင့်ဖတ်တဲ့ အချိန်မှာပဲ ၀င်းဒိုးဟာ Restart ဆိုပြီး ကျ ကျသွား ပါတယ် ပြန်တက် မလာတော့ပါဘူး ..
ဒါနဲ့ နည်းလမ်း မျိုးစုံ သုံးပြီး ၀င်းဒိုးကို ပြုပြင် ကြည့်ပါတယ် နောက်ဆုံး Recovery Image သုံးပြီး ၀င်းဒိုးကို Repair လုပ်ဖို့ ကြိုးစား တာတောင်မှ ၀င်းဒိုးက ပြန်တက် မလာနိုင် တော့လို့ ၀င်းဒိုး အသစ် ပြန်တင် လိုက်ရပါ တယ် ဇာတ်လမ်းက ဒီမှာတင် မပြီးသေးပါဘူး ..
အဲဒီ အသစ်တင် လိုက်တဲ့ ၀င်းဒိုး ကလည်း တစ်ခေါက်ပဲ ဖွင့်သုံး လိုက် ရသေးတယ် နာရီဝက် လောက် အကြာမှာ Restart ဆိုပြီး ပိတ်သွား လိုက်တာ ပထမ တစ်ကြိမ် လိုပဲ ပြန်မပွင့် ခဲ့တော့ပါဘူး .. ဒါနဲ့ ကျွန်တော်က Hard disk ကြီး တစ်ခုလုံးကို format ရိုက်ပြီး Clean Install နည်းနဲ့ ၀င်းဒိုး အသစ်ကို ပြန်တင် လိုက်မှ ၀င်းဒိုးဟာ အရင်လိုပဲ အဆင်ပြေပြေ နဲ့ ပြန်သုံး လို့ ရသွား ပါတယ်။
ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း အဲဒီ ebook ကို အွန်လိုင်း ကနေ ပြန်ဒေါင်းယူ ပါတယ် ပြီးတော့ ၀င်းဒိုးကို Defreeze အရင် အုပ်ပါတယ် ပြီးတော့ အဲဒီ ebook ကို ဖွင့် ဖတ်ပါတယ် .. အရင်လို ပါပဲ .. Message Box လေး တက်လာပြီး Restart ကျသွား ပါတယ် Defreeze အုပ်ထားတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် မူလ အခြေအနေ မပျက် ၀င်းဒိုး ပြန်တက် လာနိုင် ပါတယ် ဒါနဲ့ ကျွန်တော်က အဲဒီ ebook ကို Antivirus နဲ့ Scan လုပ်ကြည့်ပါတယ် ဗိုင်းရပ် မတွေ့ ပါဘူး Online Virus Scan တွေနဲ့ ပါ ထပ်စစ် ပါတယ် .. ဗိုင်းရပ် မတွေ့ ပါဘူး ..
ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း Google မှာ pdf virus ဆိုပြီး ရိုက် ရှာလိုက် ... PDF ဗိုင်းရပ်ဟာ ကမ္ဘာနဲ့ အ၀ှမ်း တော်တော်လေး ပြန့်ပွားနေ တဲ့ ကြောက်စရာ ဗိုင်းရပ်မျိုး ဖြစ်ကြောင်း သိလာ ရပါတယ် pdf ဗိုင်းရပ်ဟာ exe ဖိုင်မျိုး မဟုတ်လို့ Antivirus ဆော့ဝဲတွေရဲ့ စစ်ဆေးမှု ကနေ လွတ်မြောက် နိုင်ပါတယ် ကျွန်တော့်ကို အတယ် လို့ပဲ ဆိုဆို pdf virus ရှိတယ် ဆိုတာကို အရင်က တစ်ကယ် မသိခဲ့ပါဘူး ..
အခု သိလိုက် ရတဲ့ အချိန်မှာ ချဲ့ထွင် စဉ်းစား ကြည့်လိုက်တော့ pdf ဖိုင်ထဲမှာ Injection လုပ်မယ့် Java Script ကုဒ်တွေ ထဲမှာ keylogger လို အကောင့်တွေ ခိုးနိုင်တဲ့ ကုဒ် လို မျိုးတွေများ Injection လုပ်လာ ခဲ့မယ်ဆိုရင် ......ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ တော်တော်လေး တုန်လှုပ် သွားမိပြီး ကျွန်တော့် အကောင့် အားလုံး ကိုတောင် Password တွေ အမြန် လိုက် Change လိုက်မိတဲ့ အထိပါပဲ
ကဲ .. ဒါနဲ့ .. အဲဒီ PDF ဗိုင်းရပ်ရန် ကနေ ကာကွယ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းကို ရှာလိုက် ဖွေလိုက် ကလိလိုက်နဲ့ အခုတော့ အဆင်ပြေတဲ့ နည်း ပညာလေး တစ်ခုကို တွေ့ပြီမို့ ပြန်လည် မျှဝေပေး လိုက်ပါတယ် ..
ကျွန်တော်တို့ဟာ pdf ဖိုင်တွေကို ဖွင့်ကြည့်ဖို့ Adobe Reader ... Adobe Acrobat တို့လို ဆော့ဝဲ မျိုး တွေကို သုံးလေ့ ရှိပါတယ် ဘယ်ဆော့ဝဲကိုပဲ သုံးသုံး အဲဒီ ပရိုဂရမ်ကိုဖွင့်လိုက်ပါ ပြီးရင် Editကနေ Prefrence ကိုနှိပ်ပါ။
Foxit Reader သမားတွေ ကတော့ tools ကနေ သွားပါ။ ပွင့်လာတဲ့ ထဲက Java Script ကိုနှိပ်ပြီး ညာ ဖက်က ပွင့် လာတဲ့ ထဲမှာ ရှိတဲ့ Enable Java Script ရဲ့ရှေ့က အမှန်ခြစ် လေးကို ကလစ်ပေး ပြီး ဖြုတ်ပစ် လိုက်ပါ ပြီးရင် Ok ကိုနှိပ် ပေးလိုက်ပါ .. ဒါဆိုရင် pdf ဗိုင်းရပ်ကို လုံးဝ ကာကွယ် ထားနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။
အခုလိုကာ ကွယ်ထားပြီး ပြီဆိုရင် Online က ရလာ တဲ့ pdf ဖိုင်တွေ ထဲမှာ ဗိုင်းရပ် ကုဒ်ကို Injection လုပ်ထားတဲ့ pdf virus များပါလာရင် အဲဒီ pdf ဖိုင်ကို ဖွင့်လိုက်တဲ့ အခါ အောက်က ပုံအတိုင်း java script ကို ပိတ်ထား တဲ့ အတွက် အဆင် မပြေ ကြောင်း Message လေးပါ ကပ်ပွင့် လာပါ လိမ့်မယ် အဲဒီလို ဆို ရင်တော့ အဲဒီ pdf ဖိုင်မှာ ဗိုင်းရပ် မဟုတ် ခဲ့ရင်တောင် java script ကုဒ်တွေကို Injection လုပ်ထား ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ကဲ .. အဆင်ပြေကြ ပါစေဗျာ... တွေ့ရှိသော နည်းလမ်း ကောင်းလေး များကို ဆက်လက် ဝေမျှ ပေး နေပါမယ်... အားပေးမှု အတွက် အထူး ကျေးဇူး တင်ပါတယ်..
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, April 13, 2015 1 comment:
ကဏ္ဍ Virus ကာကွယ်နည်းများ, နည်းပညာ
နည်းပညာလေ့လာသူများ သတိထားရမယ့် pdf virus အန္တရာယ်
ဒီပို့စ်ကတော့ ကျွန်တော် တော်တော်ညံ့ ခဲ့ကြောင်း ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ် လှန်ထောင်း ရမယ့်ပို့စ်ပါ။
ကျွန်တော်က နည်းပညာပိုင်းကို တော်တော်လေး အားသန်တဲ့ အလျောက် အွန်လိုင်းပေါ်က နည်းပညာနဲ့
ပတ်သက်တဲ့ မြန်မာဝက်ဆိုဒ်တွေ နိုင်ငံခြားဝက်ဆိုဒ်တွေထဲမှာပဲ အချိန်ကုန်နေလေ့ ရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်
အဲဒီလို နည်းပညာဆိုဒ်တွေ ကနေ ဆော့ဝဲလေးတွေ ရလာတဲ့ အခါ စမ်းသုံးကြည့်တယ်။
အဆင်လည်းပြေ အသုံးလည်းဝင် Virus အန္တရယ်လည်း ကင်းတယ်ဆိုတာ သေချာရင် တခြားသူတွေရော
သုံးဖို့ ကျွန်တော့်ဘလော့မှာ ပြန်တင်ပြီးShare လုပ်ပေးပါတယ်နည်းပညာပိုင်းတွေထဲမှာ Programming
Language အချို့နဲ့ ဆော့ဝဲ Cracking အပိုင်း HTML Template အပိုင်းတွေကို အလေးပြုပြီး လေ့လာ ပါ
အဲဒီလို ကျွန်တော့်လေ့လာတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ebook တွေကိုလည်း ကြုံရင်ကြုံသလို Download
ယူပြီး Offline လေ့လာပါတယ်။
အဲ .. တစ်နေ့တော့ C++ စာအုပ်လေးတစ်အုပ် တွေ့တာနဲ့ Download ယူထားလိုက်ပါတယ် အဲဒီစာ
အုပ်ကို ဖွင့်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ ထူးထူးခြားခြား Message Box လေးပွင့်လာပါတယ်၊ Pdf ဖိုင်ကို အခု
လို Message Box လေးနဲ့အတူ တွဲပွင့်လာတာကို အဲဒီတော့မှ ကြုံဖူးတာပါ၊ အဲဒီမှာပဲ နည်းပညာပိုင်း
ရူးသွပ်တဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ဝမ်းတွင်း ရူးစိတ်ကြောင့် အဲဒီစာအုပ်ကို သေသေ ချာချာ လေ့လာကြည့်ဖြစ်ပါ
အဲ ... အဲဒီစာအုပ်ကို သုံးကြိမ်မြောက်ဖွင့်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာပဲ ၀င်းဒိုးဟာ Restart ဆိုပြီး ကျသွားလိုက်
တာပြန်တက်မလာတော့ပါဘူး .. ဒါနဲ့ နည်းလမ်း မျိုးစုံသုံးပြီး ၀င်းဒိုးကို ပြုပြင် ကြည့်ပါတယ် နောက်ဆုံး
Recovery Image သုံးပြီး ၀င်းဒိုးကို Repaire လုပ်ဖို့ ကြိုးစားတာတောင်မှ ၀င်းဒိုးက ပြန်တက်မလာနိုင်
တော့လို့ ၀င်းဒိုးအသစ် ပြန်တင်လိုက်ရပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းက ဒီမှာတင်မပြီးသေးပါဘူး ..
အဲဒီ အသစ် တင်လိုက်တဲ့ ၀င်းဒိုးကလည်း တစ်ခေါက်ပဲ ဖွင့်သုံးလိုက် ရသေးတယ် နာရီဝက်လောက်
အကြာမှာ Restart ဆိုပြီး ပိတ်သွား လိုက်တာ ပထမ တစ်ကြိမ်လိုပဲ ပြန်မပွင့် ခဲ့တော့ပါဘူး .. ဒါနဲ့
ကျွန်တော်က Hard disk ကြီးတစ်ခုလုံးကို format ရိုက်ပြီး Clean Install နည်းနဲ့ ၀င်းဒိုးအသစ်ကို ပြန်
တင်လိုက်မှ ၀င်းဒိုးဟာ အရင်လိုပဲ အဆင်ပြေပြေနဲ့ ပြန်သုံးလို့ ရသွားပါတယ်။
ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း အဲဒီ ebook ကို အွန်လိုင်းကနေ ပြန်ဒေါင်းယူပါတယ် ပြီးတော့ ၀င်းဒိုးကို Defreeze
အရင်အုပ်ပါတယ် ပြီးတော့ အဲဒီ ebook ကို ဖွင့်ဖတ်ပါတယ် .. အရင်လိုပါပဲ .. Message Box လေးတက်
လာပြီး Restart ကျသွားပါတယ်။
Defreeze အုပ်ထားတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် မူလ အခြေအနေ မပျက် ၀င်းဒိုးပြန်တက် လာနိုင်ပါတယ် ဒါနဲ့
ကျွန်တော်က အဲဒီ ebook ကို Antivirus နဲ့ Scan လုပ်ကြည့်ပါတယ် ဗိုင်းရပ် မတွေ့ပါဘူး Online Virus
Scan တွေနဲ့ပါ ထပ်စစ်ပါတယ် .. ဗိုင်းရပ်မတွေ့ပါဘူး .. ဒါနဲ့ အဲဒီ ebook ကို Resource Hacker ဆိုတဲ့
အဲဒီကုဒ်တွေကို သေချာလေ့လာ ကြည့်တော့မှ File format တူရာ အချင်းချင်း ဆီကို ကူးစက်အောင်
Command ပေးထားတဲ့ ဗိုင်းရပ်ကုဒ်တွေ ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း ပထမတစ်ကြိမ်ဝင်းဒိုးတင်တုန်းက တခြား Partition တွေထဲမှာရှိတဲ့ ebook တွေဆီကို
ဗိုင်းရပ်ကုဒ်တွေ ကူးစက်နေလို့ အဆင်မပြေခဲ့တာဖြစ်ပြီ Hard disk ကို Format ရိုက်ပြီးတင်လိုက်တဲ့
၀င်းဒိုးကျမှ အဆင်ပြေ သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း Google မှာ pdf virus ဆိုပြီး ရိုက်ရှာလိုက် ... အလိုလေး .. pdf ဗိုင်းရပ်ဟာ
ကမ္ဘာနဲ့အ၀ှမ်း တော်တော်လေးပြန့်ပွားနေတဲ့ ကြောက်စရာဗိုင်းရပ်မျိုးဖြစ်ကြောင်း သိလာရပါတယ်
pdf ဗိုင်းရပ်ဟာ exe ဖိုင်မျိုးမဟုတ်လို့ Antivirus ဆော့ဝဲတွေရဲ့ စစ်ဆေးမှုကနေ လွတ်မြောက်နိုင်ပါတယ်
ကျွန်တော့်ကို အ တယ်လို့ပဲ ဆိုဆို pdf virus ရှိတယ် ဆိုတာကို အရင်က တစ်ကယ် မသိခဲ့ပါဘူး .. အခု
သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ ချဲ့ထွင် စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ pdf ဖိုင်ထဲမှာ Injection လုပ်မယ့် Java Script
ကုဒ်တွေထဲမှာ keylogger လို အကောင့်တွေ ခိုးနိုင်တဲ့ ကုဒ်လို မျိုးတွေများ Injection လုပ်လာ ခဲ့မယ်
ဆိုရင် ......ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ တော်တော်လေး တုန်လှုပ်သွားမိပြီး ကျွန်တော့် အကောင့်အားလုံးကိုတောင်
Password တွေ အမြန်လိုက် Change လိုက်မိတဲ့အထိပါပဲ။
ကဲ .. ဒါနဲ့ .. အဲဒီ pdf ဗိုင်းရပ် ရန်ကနေ ကာကွယ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းကို ရှာလိုက်ဖွေလိုက် ကလိလိုက်နဲ့
အခုတော့ အဆင်ပြေတဲ့ နည်းပညာလေး တစ်ခုကို တွေ့ပြီမို့ ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် ...။
ကျွန်တော်တို့ဟာ pdf ဖိုင်တွေကို ဖွင့်ကြည့်ဖို့ Adobe Reader ... Adobe Acrobat တို့လို ဆော့ဝဲ
မျိုးတွေကို သုံးလေ့ရှိပါတယ် ဘယ်ဆော့ဝဲကိုပဲ သုံးသုံး အဲဒီ ပရိုဂရမ်ကိုဖွင့်လိုက်ပါ
ပြီးရင် Edit ကနေ Prefrence ကိုနှိပ်ပါ
ပွင့်လာတဲ့ထဲက Java Script ကိုနှိပ်ပြီး ညာဖက်ကပွင့်လာတဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ Enable Java Script ရဲ့ရှေ့က
အမှန်ခြစ်လေးကို ကလစ်ပေးပြီး ဖြုတ်ပစ်လိုက်ပါ
ပြီးရင် Ok ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ ..
ဒါဆိုရင် pdf ဗိုင်းရပ်ကို လုံးဝကာကွယ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
အခုလိုကာုကွယ်ထားပြီးပြီဆိုရင် Online က ရလာတဲ့ pdf ဖိုင်တွေထဲမှာ ဗိုင်းရပ်ကုဒ်ကို Injection လုပ်
ထားတဲ့ pdf virus များပါလာရင် အဲဒီ pdf ဖိုင်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ အောက်ကပုံအတိုင်း java script ကို
ပိတ်ထားတဲ့ အတွက် အဆင်မပြေကြောင်း Message လေးပါ ကပ်ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီလို ဆိုရင်တော့ အဲဒီ pdf ဖိုင်မှာ ဗိုင်းရပ် မဟုတ်ခဲ့ ရင်တောင် java script ကုဒ်တွေကို Injection
Pyae Thaw Blog မှ ကူးယူမျှဝေသည်။
မျှဝေသူ Unknown မှာ Sunday, August 25, 2013 No comments:
ကဏ္ဍ PDF, Virus ကာကွယ်နည်းများ, နည်းပညာ, လမ်းညွှန်
မျှဝေသူ Unknown မှာ Thursday, June 07, 2012 1 comment:
ကဏ္ဍ Virus ကာကွယ်နည်းများ, နည်းပညာ, ဗဟုသုတများ